Galaxy S9 ကနောက်ဆုံး Galaxy S Series စမတ်ဖုန်းဖြစ်သွားတော့မှာလား?
8 Feb 2018 . 4:51 PM
Samsung ရဲ့ Galaxy S Series စမတ်ဖုန်းတွေဟာ အခုဆိုရင် သက်တမ်းအရလည်း ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနီးပါးကို ရှိနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုထွက်ပေါ်နေတဲ့သတင်းတွေအရတော့ ဒီနှစ်မှာ ထွက်ရှိမယ့် Samsung Galaxy S9 ဟာ နောက်ဆုံးသော Galaxy S Series စမတ်ဖုန်းတစ်ခုဖြစ်သွားတော့မယ့်ပုံပါပဲ။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့ Samsung ကိုယ်တိုင်ကလည်း Galaxy X ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ ခေါက်ချိုးနိုင်တဲ့ဖုန်းကို ထုတ်လုပ်ဖို့စီစဉ်နေတာ အချိန်တစ်ခုရှိသွားပြီဖြစ်ပြီးတော့ အခုအချိန်မှာ Samsung ကနေ နောက်နှစ်မှာ ထုတ်လုပ်မယ့် Samsung Galaxy S10 အစား ကိန်းဂဏန်းဖြစ်တဲ့ “10” ကို ရောမစာလုံးဖြစ်တဲ့ “X” နဲ့ အစားထိုးပြီးတော့ Series နာမည်ကိုလည်း “X” အနေနဲ့ ပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အဲ့ဒီအတွက် နောက်နှစ်မှာ ထွက်ရှိလာမယ့် Samsung Galaxy S9 ရဲ့ မျိုးဆက်ဟာ “Galaxy X” လို့ပဲ ခေါ်ဆိုမှာဖြစ်ပြီးတော့ နောက်နှစ်တွေမှာတော့ Galaxy X Series အနေနဲ့ ဖြစ်သွားပြီး Galaxy X2 ၊ Galaxy X3 စသဖြင့် ထုတ်လုပ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Samsung ရဲ့ အခုလိုမျိုးနာမည်ပြောင်းလဲဖို့ စဉ်းစားတာက Apple ရဲ့ iPhone X ကို အမှီပြုပြီးတော့ ပြောင်းလဲဖို့စဉ်းစားနေတာဖြစ်နိုင်ပြီး အခုလိုမျိုး Series နာမည်ပါ ပြောင်းလဲတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီဇိုင်းပိုင်းပါ ပြောင်းလဲသွားမယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။
Samsung ရဲ့ကနေ နာမည်ကြီး Galaxy S Series ကို သတ်ပစ်တော့မယ်ဆိုရင်ရော Akhayar ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့ ဘယ်လိုမျိုးယူဆမိပါသလဲ?
Samsung ရဲ့ Galaxy S Series စမတျဖုနျးတှဟော အခုဆိုရငျ သကျတမျးအရလညျး ဆယျစုနှဈတဈခုနီးပါးကို ရှိနပွေီပဲဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အခုထှကျပျေါနတေဲ့သတငျးတှအေရတော့ ဒီနှဈမှာ ထှကျရှိမယျ့ Samsung Galaxy S9 ဟာ နောကျဆုံးသော Galaxy S Series စမတျဖုနျးတဈခုဖွဈသှားတော့မယျ့ပုံပါပဲ။
ဘာဖွဈလို့လဲဆိုရငျတော့ Samsung ကိုယျတိုငျကလညျး Galaxy X ဆိုတဲ့ နာမညျနဲ့ ခေါကျခြိုးနိုငျတဲ့ဖုနျးကို ထုတျလုပျဖို့စီစဉျနတော အခြိနျတဈခုရှိသှားပွီဖွဈပွီးတော့ အခုအခြိနျမှာ Samsung ကနေ နောကျနှဈမှာ ထုတျလုပျမယျ့ Samsung Galaxy S10 အစား ကိနျးဂဏနျးဖွဈတဲ့ “10” ကို ရောမစာလုံးဖွဈတဲ့ “X” နဲ့ အစားထိုးပွီးတော့ Series နာမညျကိုလညျး “X” အနနေဲ့ ပွောငျးလဲသှားမှာဖွဈတယျလို့ သိရပါတယျ။
အဲ့ဒီအတှကျ နောကျနှဈမှာ ထှကျရှိလာမယျ့ Samsung Galaxy S9 ရဲ့ မြိုးဆကျဟာ “Galaxy X” လို့ပဲ ချေါဆိုမှာဖွဈပွီးတော့ နောကျနှဈတှမှောတော့ Galaxy X Series အနနေဲ့ ဖွဈသှားပွီး Galaxy X2 ၊ Galaxy X3 စသဖွငျ့ ထုတျလုပျသှားမှာပဲဖွဈပါတယျ။
Samsung ရဲ့ အခုလိုမြိုးနာမညျပွောငျးလဲဖို့ စဉျးစားတာက Apple ရဲ့ iPhone X ကို အမှီပွုပွီးတော့ ပွောငျးလဲဖို့စဉျးစားနတောဖွဈနိုငျပွီး အခုလိုမြိုး Series နာမညျပါ ပွောငျးလဲတော့မှာဖွဈတဲ့အတှကျ ဒီဇိုငျးပိုငျးပါ ပွောငျးလဲသှားမယျလို့ ယူဆရပါတယျ။
Samsung ရဲ့ကနေ နာမညျကွီး Galaxy S Series ကို သတျပဈတော့မယျဆိုရငျရော Akhayar ပရိသတျကွီးအနနေဲ့ ဘယျလိုမြိုးယူဆမိပါသလဲ?